Dawladda Germany oo sheegtay inay baadhitaan ku sammaysanayso markab dalkeeda laga leeyahay oo shixnad Huba ka qaaday dalka Djibouti | Berberanews.com
Home WARARKA Dawladda Germany oo sheegtay inay baadhitaan ku sammaysanayso markab dalkeeda laga...
Dawladda Germany oo sheegtay inay baadhitaan ku sammaysanayso markab dalkeeda laga leeyahay oo shixnad Huba ka qaaday dalka Djibouti
Wakaaladaha-(Berberanews)-Markab laga leeyahay dalka Germany oo hub u siday dawladda Syria, ayaa la sheegay in sabtidii lagu joojiyay badda Mediterranean ee isku xidha qaaraddaha Yurub iyo Africa.
Dawladda Germany ayaa sheegtay inay baadhitaan rasmiya ku sammayn doonto xaaladda Markabka oo tankiisu yahay 6,200, lana sheegay inuu siday hub iyo saanada milateri oo siday warbixintu sheegtay u socday magaalada Dekedda Tartus ee dalka Syria.
Warku waxa uu intaa ku darayaa inuu markabku maalmo ka hor ku xidhay Dekedda Dalka Djibouti, halkaasoo uu ka qaaday hub uu siday markab kuwa Kaargooga ah oo laga leeyahay dalka Iran.
Sida uu sheegay masuul u hadlay shirkadda Markabkan oo fadhigeedu yahay magaalada Hamburg ee dalka Germany waxa uu sheegay inay joojiyeen markabka ka dib macluumaad ku saasan hubka la sheegay inuu sido oo la siiyay, “Waanu jiijinay markabka ka dib markii aanu macluumaad ka helay xammuulka hubka.”sidaa waxa yidhi Der Spiegel oo u hadlay shirkadda Markabkan oo lagu magacaabo Torsten Lueddeke.
Markabkan oo sida la sheegayo saanad hub oo badan u siday Madaxweynaha shacabkiisu kacdoonka kula jiraan ee Bashar Al- Asad waxa ku wargeliyay shirkadda markabkan koox isku magacawday “Difaacayaasha Syria” oo la xidhiidhay shirkadda markabka, ka dibna waxay shirkaddu ku ammartay markabku inuu joojiyo safarkiisa, kaasoo haatan si ku meelgaasha ugu xanniban meel 80km Koonfur-galbeed kaga began magaalada Tartu see dalka Syria.
Wasiirka dhaqaalaha Germany, ayaa sheegay inay ilgaara u hayaan baadhitaanka arrintan.
Previous articleMarkab u rarnaa Ganacsato Reer Somaliland ah oo Budhcad-badeeddu haysatay oo maanta soo gaadhay Dekedda Berbera
Next articleSouth Sudan troops ‘repel oil town attack’